Isiseko seBongo: ubuchopho bentsha buguqula iminyaka yobudala 25 | Umvuzo weZiseko
Ikhaya Basics Brain Ubuntongo Ubuncinane
Ixesha lokufikisa liqala kwiminyaka eli-10 ukuya kweli-12 ngokufikisa kwaye liqhubeka de kube li-25 iminyaka. Kuyanceda ukuqonda ukuba ingqondo yokufikisa ikwimizimba, i-anatomiki kunye nolwakhiwo olwahlukileyo kunolo lomntwana okanye olomntu omkhulu. Inkqubo yokutshatisa iyaqhuma ibe kukuqonda kwethu ngokufika kwehomoni zesini xa ufikisa. Kulapho ingqalelo yomntwana isuka koonodoli kunye neemoto ezibalekayo ziye kwindawo yokuqala yendalo, ukuzala kwakhona. Iyaqala ke ukuba nomdla wokufikisa kwisini kunye nendlela yokufumana amava aso.
Inkulumo elandelayo ye-TED (i-14 mins) yesazi-nuroscientist uSolwazi uSarah Jayne uBlakemore obizwa ukusebenza ngokumangalisayo kwengqondo yobutsha, uchaza ukuphuhliswa kwengqondo yengqondo yomntwana. Kodwa akathethi malunga nesondo, i-pornography isebenzise okanye imiphumo. Iindaba ezilungileyo kukuba le nto ibalulekileyo intshumayelo (I-50 mins). Nguye uprofesa we-neuroscience kwiSizwe seZiko leMithi e-US kwaye uchaza indlela ezinobungozi obunobuthi ezinjengotywala okanye iziyobisi kunye neenkqubo ezinjengezemidlalo, ukugqithisa kunye nokugembula kungabangela ingqondo yengqondo.
Oku kuhle kakhulu podcast (I-56 mins) nguGary Wilson ubhekisana ngqo nendlela i-intanethi yeyona nto iphosa ngayo ingqondo yengqondo. Uchaza umahluko phakathi kwe-masturbation kunye nokusetyenziswa koonografi.
Ubuntwaba lixesha lokufunda ngokukhawuleza. Ngethuba xa siqala ngokukhawuleza sifuna amava amatsha kunye nezakhono esizidingayo kubantu abadala ekulungiseleleni ukushiya isidleke. Ingqondo nganye iyingqayizivele, idalwe kwaye ifakwe yimfundo yayo.
Ukufunda okunokukhawuleza kwenzeka njengoko ingqondo idibanisa inkqubo yokuvuza ngokudibanisa imimandla yesigxina kunye neemvakalelo zethu ngakumbi kwi-correx ye-prefrontal, indawo ejongene nokuzithiba, ukucinga ngokucokisekileyo, ukuqiqa kunye nokucwangcisa ixesha elide. Ikwaxhamla ngokukhawuleza phakathi kwala macala ahlukeneyo ngokugubungela iindlela ezininzi ezisetyenziselwa ukunyanelana ne-fat white matter ebizwa ngokuthi i-myelin.
Emva kwexesha lokudibanisa kunye nokuhlelwa kwakhona, ingqondo yenkwenkwezi ikhupha i-neurons engasetshenziswanga kunye nokuxhumeka okunokwenzeka ukushiya iindlela ezinamandla eziqulunqwe ngamava aphindaphindiweyo kunye nomkhwa. Ngoko ukuba abantwana bakho abaselula banokuchitha ixesha elide kwi-intanethi, okanye baxubana nabanye abantu abaselula, ukufunda, ukufunda umculo okanye ukudlala imidlalo, iindlela eziqhelekileyo ziya kuba njengeendlela ezinkulu ezikhawulezayo xa ziba ngabantu abadala.
Ngethuba eliselula, umnqweno wovuyo ophezulu. Ubungqina bentsholongwane buvelisa i-dopamine engaphezulu kwaye bayabakhathalela, baqhuba ukuba bavavanye umvuzo omtsha kwaye bathathe ingozi. I-dopamine eyongezelelweyo inceda kwakhona ukuqinisa nokuqinisa ezo ndlela ezintsha.
Ngokomzekelo banelungelo lokunyamezela ngokunyamezelayo, ukuthusa, ukunyanyiswa kwamanyathelo, iifilimu ezibuhlungu eziza kuba nabantu abadala ababaleka ukufihla. Abakwazi ukufumana okwaneleyo. Ukuthatha inengozi yinto engokwemvelo yentuthuko yabo, njengemida yokuvavanya, igunya elijongene nemingeni, ukufaka ubungqina babo. Yiloo nto ebuntwaneni bonke. Bayazi ukuba ukusela, ukuthatha iziyobisi, ukulala ngokwesondo kunye nokulwa kunokuba yingozi, kodwa umvuzo wovuyo 'ngoku' unamandla ngaphezu kokukhathazeka ngemiphumo emva.
Umngeni apha nawuphi na ojongana nabantwana abaselula namhlanje kukuba ingqondo yengqondo yaselula iyingozi kakhulu kwimpilo yengqondo kubandakanywa izilwanyana, ikakhulukazi izidakamizwa ze-intanethi. Ukuba nomlingo omnye kunokuqhuba ukukhangela ezinye izinto kunye nezinto ezigcina i-dopamine ekhulayo. Ngenxa yoko izidakamizwa eziphambene nomzimba ziqhelekileyo-nicotine, utywala, iziyobisi, i-caffeine, i-intanethi ye-intanethi, umdlalo kunye nokugembula, umzekelo, konke ukunyanzelisa inkqubo kwaye kuvelise imiphumo emibi engapheliyo kwimpilo yengqondo nengokwenyama.
Ukuphilela okwangoku-Cothisa izaphulelo
Kutheni kunjalo? Kungenxa yokuba ii-lobes zangaphambili ezisebenza 'njengeebhuleki' kwindlela yokuziphatha eyingozi azikakhuli kwaye ikamva likude kakhulu. Oku kwaziwa njengokuncitshiswa kwezaphulelo-ukukhetha ukwaneliseka kwangoko kumvuzo kwixesha elizayo, nokuba kamva kubhetele. Uphando olubalulekileyo lwamva nje lubonakalisile ukuba iphonografi iyazisebenzisa ivelisa amazinga aphezulu ukulibaziseka ukuphuhlisa. Oku kufuneka kukhathazeke ngokwenene kubazali nootitshala. Nantsi iluncedo inqaku kwinqanaba elixubusha uphando olutsha. Inqaku elipheleleyo likhoyo Apha. Ngamafutshane, abasebenzisi be-porn abaye bancama ukusebenzisa i-porn kwiiveki nje ezi-3 bafumanisa ukuba babekwazi ukulibazisa ukwaneliseka kunezo zifundo zazingenabo. Ukukwazi ukulibazisa ukonwaba sisakhono esiphambili sobomi esibuthathaka ekusebenziseni iphonografi kwaye sinokuphendula ngeziphumo zeemviwo ezihlwempuzekileyo, imveliso ephantsi kunye nokuzithemba ngokubanzi okufunyanwa ngabasebenzisi abaninzi be-porn. Iindaba ezimnandi zoku kukuba oku kubonakala ngathi kuyajika ekuhambeni kwexesha xa abasebenzisi beyeka iphonografi. Bona apha ngemizekelo yokuzixela amabali okubuyisela.
Xa siba ngabantu abadala, nangona ingqondo iqhubeka ifunda, ayinjalo kwinqanaba elikhawulezayo. Yingakho oko sikhetha ukufunda ebusheni bethu kubaluleke kakhulu kwixesha lethu elizayo. Ifestile yithuba lokufunda ngokujulile lincinci emva kwexesha elikhethekileyo lokukhula.
Ubomi obuBomi yiBrained Integrated
Ingqondo ephilileyo yintliziyo ebudibeneyo, enye ingakwazi ukulinganisela imiphumo kunye nokwenza izigqibo ngokusekelwe kwinjongo. Iyakwazi ukusekela injongo kunye nokufezekisa. Unamandla okunyamezela. Iyakwazi ukungaqhelekanga imikhuba engasayi kuyenza enye. Kudala kunye nokukwazi ukufunda izakhono ezintsha nemikhwa. Ukuba sisebenzela ukuhlakulela ingqondo edibeneyo, sandisa kwaye sakha umbono wethu, siyachuma, siyabona oko kwenzekayo phakathi kwethu kwaye siyazikhathalela iimfuno zabanye. Siyachuma, sinandipha ubomi kwaye sinokufikelela ekunokwenzeka kwethu.
<< Inkqubo Yomvuzo